Qaraxyo Ka Kala Dhacay Duleedyada Balcad Iyo Shalambood. – Calamada.com
Qaraxyo Ka Kala Dhacay Duleedyada Balcad Iyo Shalambood.
Weeraradan qaraxyada ah waxey ka kala dhaceen qeybo ka mid ah gobalada Shabeelada Hoose iyo Shabeelada dhexe kuwaas oo lala beegsaday ciidamada Kufaarta Afrikaanta.
Qaraxa Kowaad waxa uu ka dhacay agagaarka deegaanka Gololeey oo hoostada degmada Balcad ee Wilaayada Shabeelada dhexe,iyadoo dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay deegaano badan oo ka tirsan gobalkaasi.
Miinada ayaa haleeshay gaari Taw ah oo qeyb ka ah kolanyada Kufaarta Afrikaanta ee la beegsaday waxaana gabi ahaan burburay gaariga Gaashaaman ee qaraxa uu haleelay,sidoo kale waxaa baqti iyo dhaawac noqday askartii Kufaarta Burundi ee gaarigaasi la socotay.
Kolanyada qaraxa lala beegsaday ayaa ka timid degmada Jowhar waxeyna kusii jeeday magaalada Muqdisho,qaraxan ayaa kusoo aadaya xilli dhow jeer sidaan oo kale Kufaarta iyo Murtadiinta weeraro isugu jira qaraxyo iyo Kamaa’ino lagula beegsaday wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar weeraradaasi oo si aad ah loogu dhiigbixyay Cadowga Allaah.
Qaraxa Labaad waxa uu ka dhacay agagaarka deegaanka Shalambood ee Wilaayada Shabeelada hoose waxaa qaraxan sidoo kale lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Afrikaanta.
Qaraxan ayaa sidoo kale ciidamada Kufaarta Afrikaanta looga gubay gaari Taw ah waxaana baqti iyo dhaawac kaga noqday tiro askarta Kufaarta ah,waxa uu qaraxan kusoo aadaya xilli Labo maalin ka hor qarax Kufaarta Afrikaanta lagula beegsaday duleedka degmada Buulo mareer ee isla Wilaayada Shabeelada hoose looga gubay gaari Taw askarna looga dilay.
Weeraradan qaraxyada ah ayaa kusoo aadaya xilli ciidamada Mujaahdiiinta ay sii kordhiyeen weerarada lagu dhiig bixinayo Kufaarta iyo Murtadiinta isu soo baheysatay la dagaalanka diinta Islaamka iyo dadka Muslimiinta.
Previous: Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 07-12-1439 Hijri.